MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA BEDLINGTON TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Bedlington Terrier Dog
Glenn, nin lab ah oo Bedlington Terrier ah oo jira 8 bilood oo ka yimid Bedlington Village Northumberland
Liiska eeyaha ee loo yaqaan 'Bedlington Terrier Mix Breed Dogs'
Terrier Rod Rod
sariir-ling-tuh n ter-ee-er
Terrier-ka Bedlington wuxuu leeyahay muuqaal wan yar. Eyga madaxiisa pear u eg ayaa cidhiidhi ah, laakiin qoto dheer oo wareegsan. Afka ayaa xoog leh iyada oo aan la joogsan. Indhaha yicibta u eg waa kuwo yaryar oo qoto dheer. Daanka ayaa ku kulma heer ama maqasyada qaniinyada. Dhagaha hoose ee hoose waa saddexagal leh talooyin wareegsan. Laabta ayaa qoto dheer dhabarkuna waa qalooca. Lugaha dambe ayaa ka dheer kuwa toosan, lugaha hore. Dabada ayaa hooseysa, dhumuc weynaatay xididka waxayna taabataa meel. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Bedlington waxay leedahay jaakad laba jibbaaran oo isku dhafan oo timo adag oo jilicsan oo ka soo baxa maqaarka. Midabbada waxay ku yimaadaan buluug, bacaad leh, beerka, buluug iyo cagaar, bacaad iyo cagaar, iyo beer iyo cagaar. Calaamadaha tan ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan indhaha, laabta, lugaha iyo gadaasha.
Terling Bedlington waa ciyaar ciyaar, farxad iyo kalgacal, sameynta wehel qoys oo wanaagsan. Jacaylka carruurta iyo si cadaalad ah saaxiibtinimada shisheeyaha waa mid aamin ah oo nool, laakiin waxay noqon kartaa ula kac iyo madax adag haddii ay dareento milkiiliyayaashu waa kuwa camal qabow ama aan caadi ahayn . Noocani wuxuu u baahan yahay inuu barto sida loola dhaqmo bisadaha iyo kuwa kale xoolaha guriga markay da 'yartahay. Badanaa way is fahmi karaan eeyo kale , laakiin ka fogee kuwa doonaya inay xukumaan, sidii mar loolanku galay waa dagaalyahanno argagax leh, in kasta oo muuqoodu dabacsan yahay. Badanaa waxaa loo yaqaan 'xoogaa awood yar,' waa geesinimo iyo firfircooni. Waa qodayaal xamaasad badan. Iyagu waa orod-yahano aad u dheereeya waxayna u baahan yihiin in la baro inay soo noqdaan marka la waco. Bedlington waxay jecel yihiin inay ciyo, oo waxay u baahan yihiin in loo sheego wax ku filan waa ku filan haddii ay noqoto mid aad u qas badan. Way sarreyn karaan iyaga oo aan ku filnayn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Kaliya u daa tarankaani inuu ka baxo hogaankiisa aag ku lifaaqan. Sida oo kale Xoq , wuu deg deg badan yahay wuuna jecel yahay cayrsashada! Hubso inaad had iyo jeer tahay eeygaaga mid adag, kalsooni leh, hoggaamiye baako xirmo leh si aad uga fogaato Cudurka Dog yar , iyo kala-go'id walaac .
Miisaanka: Ragga 18 - 23 rodol (8 - 10 kg) Dumarka 18 - 23 rodol (8 - 10 kg)
Bedlington Terriers waxay lahaan kartaa dhibaato daran oo xagga beerka ah oo loo yaqaan 'Copper Storage Disease'. Waxay sidoo kale u nugul yihiin cudurka kelyaha ee la iska dhaxlo, PRA, dhibaatooyinka qanjirka 'thyroid' iyo dhibaatooyinka indhaha, sida cataracts iyo retina disease.
Noocani wax fiican kuma qaban doono aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Eeyadan fir-fircoon waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan, sida kuwa kale ee la midka ah, waxay noqon doonaan caajis iyo xumaan la'aan. Waxay u baahan yihiin in loo qaado a socod dheer maalin kasta .
17+ sano hal haween ah ayaa soo sheegtey in Bedlington ay nooleyd 23 sano.
3 - 6 eeyo
Koodhku wax yar buu tuurayaa timo la'aan wuxuuna u baahan yahay liis garayn khaas ah lixdii toddobaadba mar, markaa waxay u badan tahay inay fiican tahay inaad barato inaad adigu sameyso. Koodhku waa khafiifsan yahay oo la jarjaray meel u dhow madaxa iyo jidhka si loo xoojiyo qaabka. Dhagaha xiro si taxadar leh adigoo uga tagaya faleebada talooyinka. Lugaha, timaha ayaa ka yara yaraaday. Caday si joogto ah eyga una nadiifi jeexitaanka dhegaha gudihiisa. In kasta oo maydhashada joogtada ahi aysan u engejin doonin maqaarka sida ay ugu dhacdo noocyo kale oo badan, haddana waa in aan la dhaqin marar badan ama jaakaddu waxay noqon doontaa mid xijaab leh, taas oo aan loo arkin inay ku habboon tahay taranka. Eeyaha la muujinayo waxay u baahan yihiin heerar sare oo qurxin ah. Noocani waxaa loo arkaa inuu ufiican yahay kuwa xasaasiyada qaba.
Terling-ka 'Bedlington Terrier' waxaa loo soo saaray oo loogu magac daray magaalada macdanta laga qodo ee Bedlington ee ku taal waddanka Northumberland, England. Magaca asalka ah ee Bedlington Terrier wuxuu ahaa Rothbury Terrier, oo loogu magac daray degmada Rothbury oo ku taal xadka Ingiriiska. Qiyaastii 1825 ayaa noocii loo badalay Terling Bedlington ka dib markii loo magacaabay Bedlington Mining Shire. Noocani wuxuu ahaa eey ugaarsi ugaarsi ah oo dawaco ah, haare iyo calaamado. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday ugaarsade xayawaan ah qodayaasha Bedlington. Macdan qodayaashu waxay uga faa'iideysteen cayaarteeda sida eey dagaal ku jira godadka dhexdooda ugaarsataduna waxay u adeegsadeen inay wax ku soo ceshadaan. Labadaba Otterhound iyo Dandie Dinmont Terrier waa kuwo wax ku biirin kara taranka. Qaar ka mid ah soosaarayaasha, gaar ahaan kuwa England ayaa ka gudbi doona Bedlington Jeedal iyo Greyhounds si loo soo saaro waxa ay ugu yeeraan Kaadiyo .
Finland, oo ah CH Bedlington, oo ay iska leeyihiin oo ay jecel yihiin, Ritva Kohijoki, sawir qadarin leh Moonshadow Bedlington Terriers
american bulldog bulug bulug bulug
Amiirka Norwey! A beerka Bedlington Terrier eey, sawir qadarin leh Moonshadow Bedlington Terriers
Brenin quruxda badan ee Bedlington waxay ka timid buuraleyda Scotland
Brenin Terling-ka Bedlington
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo Terrier-ka Bedlington ah
Bedlington Terrier Sawirada 1
Bedlington Terrier Sawirada 2
Bedlington Terrier Sawirada 3
Bedlington Terrier Sawirada 4
Bedlington Terrier Sawirada 5
injirta eyda vs injirta aadanaha
sawirada eeyaha cad ee godka cad
isku-darka cagaarshowga buluuga ah ee huruudda ah
collie xadka isku darka heeler cas
chihuahua iyo spaniel Cocker isku darka